Oge-Oge - Ntinye iji nweta foto satịlaịtị na AutoCAD - Geofumadas
Eprel, 2019 AutoCAD-AutoDesk
Timeviews bụ ngwa mgbakwunye na-adọrọ adọrọ nke na-enye ohere ịnweta foto satịlaịtị nke si na AutoCAD, n'oge dị iche iche na mkpebi.
Na-ewere ihe ngosi dijitalụ nke esemokwu m nwere natara na Google Earth, ugbu a achọrọ m ịhụ ihe ndị mere eme nke ebe a.
1. Họrọ ebe mmasị.
Usoro dị mfe. A họpụtara taabụ oge Timeviews, mgbe ahụ na akara ngosi «View imagery», na ịpị otu isi n'etiti etiti ebe masịrị anyị na nke na-ewelite otu panel nke na-ekwu na gburugburu nhazi ahụ enwere onyonyo dị na ụbọchị dị iche iche :
1 foto mbugharị 19, na pixel nke 30 centimeters,
1 foto mbugharị 18, na pixel nke 60 centimeters,
7 17 zipu ihe oyiyi, na pixel nke mita 1.20,
7 16 zipu ihe oyiyi, na pixel nke mita 2.30,
7 15 zipu ihe oyiyi, na pixel nke mita 4.60,
na 7 zipu ihe oyiyi 14, na pixel nke 9.3a mita,
Mgbe m na - ahọrọ mkpebi 17, mgbe ahụ ọ na - egosi m ụbọchị nke ihe oyiyi ahụ:
6 ha si Airbus na ụbọchị July, Nọvemba na Disemba nke 2018, nakwa na ihe kachasị dị nso bụ naanị ọnwa abụọ gara aga (16 nke February 2019).
Ọ na-egosikwa m na e nwere DigitalGlobe nke July site na 2017.
2. Mepee onyonyo ahọrọ.
Ozugbo ahọpụtara nhọrọ ahụ na nhọrọ Nhọrọ, anyị nwere ike ịhụ onyinyo ahụ na mkpebi ahụ nyere yana na nchekwa AutoCAD anyị nwere.
3. Tinye usoro ihe mere eme.
Site na ịpị na bọtịnụ "gbakwunye echiche oge" anyị nwere ike ịhọrọ usoro ntanetị si n'otu mpaghara iji tụnyere.
3. Nweta ihe oyiyi.
Ngwa a na-adọrọ mmasị nke ukwuu, ebe ọ na-enye gị ohere ịlele onyonyo ndị dịnụ nke mpaghara yana ọbụlagodi ohere ịzụrụ ha n'aka onye na-eweta ya. Ekwesiri iburu n'uche na onyonyo ndị dị adị abụghị Mozis, mana usoro ihe onyonyo na satịlaịtị na-atụgharị ụfọdụ. Ihe onyonyo na - esote gosipụtara dị n’etiti onyonyo iri abụọ 19 na otu mbugharị 14 nke dị n’azụ.
Ọrụ ahụ erubeghị, ma ọ ga-abụ ọrụ ọrụ kachasị elu nke Plex.Earth Nkwụnye maka AutoCAD.
N'ozuzu, ana m achọta ya ihe na-adọrọ adọrọ, nke nwere ọtụtụ ikike; N'aka nke aka imata ihe omuma sitere na otu ebe, jiri ngbanwe nke ihe omuma tụnyere. Nke kachasị mma, na-arụ ọrụ na AutoCAD, ọbụna na nsụgharị ndị ọhụrụ; na ọhụụ nke "ngwanrọ dị ka ọrụ" n'ihi na enweghị ịzụta ihe oyiyi ahụ, ịnwere ike iji foto satịlaịtị nweta ndenye aha na ọrụ Plex.Earth.
N'ihe gbasara mmelite nke nwere ike ịbara onye ọrụ ahụ uru bụ igosi ndepụta nke igbe dị n'ime ebe a na-etinye ya, kama ịga n'ihu na-aga n'ihu; dị ka ị ga-ahụ ụfọdụ coverages na Google Earth.
Previous Post«Previous Usoro akara sitere na Google Earth - na usoro 3
Next Post Supermap - siri ike 2D na 3D GIS ihe ngwọta zuru okeNext »